ဓမ္မရသ: `ဘာကိစ္စနှင့် လာကြပါသလဲ..?´
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 8.11.08
သာဓု သာဓု သာဓုပါ မောင်လေး။ “ငယ်၍ ငယ်၍၊ လျော့လျော့ လာပြီ” ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ သေချာမှတ်သွားပါတယ်။
သေမည့်ဘက်ကို တစ တစ နီးကပ်လာပြီဖြစ်လို့ အသက်သည် `ကြီးလာပြီ´ လို့မဆိုထိုက်ပဲ၊ `ငယ်၍ ငယ်၍၊ လျော့လျော့ လာပြီ´၊ သေဘက်သို့ နီးကပ်၍ လာပြီလို့ ဆိုလျှင် ပိုပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်။
အရမ်းမှန်တယ်ဗျာ ။ အဲဒီစာသားလေး ။ ကျေးဇူးတင်ပါ
တယ် ကိုဦး ။ အစဉ်အားပေးနေပါတယ် ။
Thanksabunch for your excellent post.
လူဘ၀ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရင် ၀ိဇ္ဇာဆိုတဲ့ လောကုတ္တရာ ကုသိုလ် ကိုရရှိအောင် လုပ်မှသာလျှင်လူ့ဘ၀ရရှိရကျိုးနပ်တယ
်လို့ထင်ပါတယ်။အရင်ပထမအရွယ်တုန်းက နားမလည်လို့ စရဏ တရားတွေ နဲ့ပဲကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်..အခုဒုတိယအရွယ်မှာ ၀ိပဿနာတရားတွေကိုကိုယ်တတ်နိုင်
နေဦးမှာ ဆိုတော့ လူသားတိုင်း ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ရရှိပြီး လောကီလောကုတ္တရာအကျိုး
သယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ အခု လို စာကောင်း၊ပို့စ်ကောင်းတွေကိုနားလည်အောင်
နော်/နိဗ္ဗာန် ၉ပါးဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲသိချင်လို့ပါ။
udkatmifOD;udkav;pm;ygw,f/tawG;aumif;aumif;eJ.w&m;aumif;w&m;jrwfrsm;udkqufvufa&;om;Edkifygap/udkatmifOD;&J.pmaytqifh[momreftqifhr[kwfyg/ qufvufBudK;pm;&ifjrefrmAk'¨bmom0ifvlrsdK;wdk.twGuftm;udk;&rnfhw&m;a&S. aqmifq&maumif;wpfOD;ay:xGef;vmzdk.taBumif;&Sdaeygw,f/